travelaustria Archives | Save A tareenka
Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo Waxaa jira yaraanta ma soo jiidashada leh xad-dhaaf ah ee Europe. doonka ah adrenaline iyo kuwo isboorti xad-dhaaf ah la kulmi karaan dalal kala duwan oo Yurub ah la tiro balaadhan oo ah waxqabadyada. Haddii aad la yaaban yihiin sida ay halkaas ka heli tareen, waxaan kugu daboolay, sidoo kale! Halkan waxaa noo top…
Waqtiga Akhriska: 4 daqiiqo Haddii aad u yaabsan meesha laga helayo matxafyada ugu fiican Yurub, waxaan kugu daboolay! Haddii ay tahay tahay, taariikhda qaranka ama dabiiciga ah, matxafyada ka our liiska ma uu taag darnaan doono inay idin yaabiyo. Waa maxay more, waxaad ku gaari kartaa meelahaas oo dhan tareenka…
Safarka tareenka, Tareenka Safarka ah ee Austria, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareenka Safarka Jarmalka, Tareen Safar Talyaani, Tareenka Safarka Iswidhan, Tareen Travel The Netherlands, ...
Waqtiga Akhriska: 4 daqiiqo hotels taariikhiga ah ee Europe ma yihiin aragti naadir ah, gaar ahaan magaalooyinka waa weyn oo leh taariikh qani ah. Paris, London, Rome, Munich, Vienna - dhammaan magaalooyinka waxay leeyihiin meelo qurxoon in ay bixiyaan. Dalxiisayaasha doonaya xoogaa raaxo dhaqameed ah dhib kalama kulmin inay helaan meel…
Safarka Business by tareenka, Safarka tareenka, Tareenka Safarka ah ee Austria, Tareenka Safarka ee Britain, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareenka Safarka Jarmalka, Tareen Safar Talyaani, ...
The 6 Waa in Isku day Suxuunta Austria
by Elizabeth Kawamura
Waqtiga Akhriska: 7 daqiiqo Kuwani waa musings ku suxuunta fiican degaanka aan ku riyaaqay, intaan joogo Austria. Aan halkaas joogay xagaaga 2016 waayo, internship 4 bilood at a NGO degaanka yar oo cabbirkooda. waayo-aragnimo internship waxa uu ahaa sidaas u weyn oo, inaan la kulmay karti…
Tareenka Safarka ah ee Austria, safarka Europe
A Qorsheeyaha Europe Route caawiyaa Waxaad Dul
Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo A Qorsheeyaha Europe Route waxaa lagama maarmaan ah in qabanqaabada safarkaaga tareen guud ahaan Yurub. First of dhan, waxaa jira in ka badan 10,000 Meelaha mid booqan kartaa in Europe. Sababo la xiriira tirada dalal, waxaa muhiim ah in baaritaan sida loo khariidada safarka aad. laga yaabaa in aad rabto in aad…
Tareenka Safarka ah ee Austria, Tareenka Safarka Belgium, Tareen Safar Talyaani, Tilmaamaha Tareenka Safarka, safarka Europe
Waqtiga Akhriska: 5 daqiiqo lover kasta oo khamri run ogyahay in magaalooyinka khamri Yurub bixiyaan khamri la awoodi karo oo la yaab leh. From France Italy, oo dheeraad ah, dalalkaas waxaa loo aqoonsaday by badan oo ay leeyihiin raagay ugu fiican adduunka. In ka qayb, this is due to the ideal climate growing…